Depiote Tim : “Mpamadika ny Mapar” -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote Tim : “Mpamadika ny Mapar”
Nitrangana savorovoro teny Antaninarenina omaly. Tonga teny an-toerana saika hamoaka ireo mpiasa miasa tamin’ireo minisitera roa, ny minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola sy ny minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra mantsy ireo mpitolona avy etsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna Analakely, notarihin’ireo depiote avy amin’ny antoko Tim. Tsy tazana nanatevin-daharana ireo mpitolona sy ireo depiote Tim kosa ny avy amin’ny Mapar tamin’izany. Tsy nampihemotra ireo mpitari-tolona niaraka tamin’ny sendikan’ny mpiasa vitsivitsy anefa ny tsy nahatazana ireo avy amin’ny Mapar fa dia roso hatrany ny dian’izy ireo amin’ny fitarihana sy famoahana ireo mpiasa hanatanteraka fikomiana miaraka amin’izy ireo.
Izany hoe, raha ny fitakian’izy ireo, dia tsy tokony hitantana departemanta ministerialy ireo minisitra avy amin’ny antoko HVM izay efa nitana toerana minisitra teo aloha, tamin’ilay governemanta notarihin’ny praiminisitra teo aloha, Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Hatreto, voaporofo izao fa nizara ny lalan’ireo depiote ho an’ny fanovana na ny depiote 73. Vaky ihany koa ny ady, raha ny kabarin’ny depiote Hanitra Razafimantsoa avy amin’ny Tim tetsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna Analakely. Tsy nitsitsy fitenenana mantsy ireo avy amin’ny Tim nanoloana ireo vahoaka mpanohana ny hetsika etsy Analakely, ary nilaza izy ireo fa mpamadika ireo solombavambahoaka avy amin’ny Mapar. Izany rehetra izany dia efa miendrika fifampihantsiana, eny, fa na tsy namaly ny fanaratsiana nataon’ny Tim azy aza ny avy amin’ny Mapar.
Hatreto, vaky tanteraka aloha ny ady eo amin’ny roa tonta. Samy manana ny lalan-kizorany, ka ny Tim mbola manohy ny hetsika fanakorontanana mitety minisitera, ary ny Mapar nahazo toerana dia nangina sy tsy heno intsony. Hatramin’izay anefa ny fangataham-pialan’ny Filoham-pirenena no niarahan’izy ireo nohirahiraina hatrany tetsy Analakely. Ankehitriny, nangina tanteraka vantany vao tafatsangana ilay governemantan’ny marimaritra iraisana. Ny Tim indray tsy maty voalavo an-kibo na dia efa nomena seza sahaza azy. Mbola mahita izao antsonjay sy fitakiana tsy misy fiafarany lava izao.
« Pour la sécurité de ses employés et du matériel, Free FM a décidé d’interrompre ses émissions (…) Nous assumons la responsabilité de cette décision ». Io no nambaran’i Lalatiana Rakotondrazafy, tao amin’ny pejy Facebook ny ...Tohiny